संसदलाई बन्दी बनाउने नेकपा कि उपसभामुख ?
संसदलाई बन्दी बनाउने नेकपा कि उपसभामुख ? प्रवक्ता भन्छन्, ‘उपसभामुखले राजीनामा नदिँदा समस्या भयो’
नवराज कुँवर काठमाडाैं, २७ पुस
हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत ४ पुसमा सुरू भएको प्रतिनिधिसभा बैठक अहिलेसम्म तीन पटक स्थगित भइसकेको छ ।
११ र १६ पुसमा अघिल्लो दिन सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिएको थियो भने २७ पुस अर्थात् आज सुरू हुनुभन्दा १ घण्टाअघि (मध्यान्ह १२ बजे) बैठक स्थगित गरियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेबीचको असमझदारीका कारण प्रतिनिधिसभा ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनेको हो ।
‘नेकपा नेतृत्व र उपसभामुख तुम्बाहाम्फेबीच जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने परिस्थिति बनेको छ’, राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल भन्छन्, ‘नेकपाले तुम्बाहाम्फेलाई विश्वासमा लिन नसक्नु र तुम्बाहाम्फेले पार्टीलाई विश्वास नगर्नु नै समस्याको मुख्य जड हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभालाई नेकपाले ‘लाचार छाया’ बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
के चाहन्छ नेकपा ?
नेकपा सभामुख पद गुमाउन चाहँदैन । संविधानले एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख स्वीकार गर्दैन । यसअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेका थिए भने एमाले कोटाबाट डा. तुम्बाहाम्फे उपसभामुख बनेकी थिइन् ।
यी दुवै पार्टी एकता भई नेकपा बनेदेखि नै नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद नेकपाले छाड्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । यससम्बन्धी एउटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
गत असोजमा बलात्कार प्रयासको अभियोग लागेर महरा जेल गएपछि सभामुख पद रिक्त छ । सभामुख पद नगुमाउँदा नेकपाले उपसभामुख छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन नेकपा नेतृत्वले दबाब दिएको छ ।
केही सातायता उसले सभामुख उम्मेदवार टुंग्याउने प्रयास गरिरहेको छ । नेताहरू अग्नि सापकोटा र सुवासचन्द्र नेम्वाङमध्ये एक जनालाई सभामुख बनाउन मूल नेतृत्वमा छलफल भइरहेको बताइन्छ ।
तुम्बाहाम्फे के भन्छिन् ?
उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फे कुनै हालतमा राजीनामा नगर्ने अडानमा छिन् । आफूनिकटका नेताहरूसँग उनले बरु महाअभियोग सामना गर्न तयार रहेको बताउने गरेकी छन् । अध्यक्षद्वय र सचिवालय बैठकले गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गरिसकेकी छन् ।
‘बरु महाअभियोग सामना गर्छु’
उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फे राजीनामा नदिने आवश्यक परे महाअभियोग सामना गर्नसमेत तयार रहेको बताउँछिन् ।
‘पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार टुंग्याएको हो भने सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो,’ तुम्बाहाम्फे भन्छिन्, ‘अहिल्यै राजीनामा दिएर संसदलाई नेतृत्वविहीन बनाउन चाहन्नँ ।’
उपसभामुख नै बाधक
नेकपाले भने उपसभामुखले राजीनामा नदिएसम्म सभामुखको उम्मेदवार अघि सार्न नमिल्ने तर्क गरेको छ । ‘उपसभामुखकै कारण परिस्थिति जटिल बनेको हो,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेकपाको कारणले प्रतिनिधिसभा अनिर्णयको बन्दी भएको होइन ।’
उपसभामुखले राजीनामा नदिई नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार अघि सार्न संवैधानिक रूपले नै नमिल्ने भएकाले तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गर्न लिखित निर्देशन पार्टीले दिइसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘पहिला उहाँ (तुम्बाहाम्फे)ले राजीनामा दिनुपर्‍यो, त्यसपछि नेकपाले तत्काल सभामुखको उम्मेदवार सार्वजनिक गर्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उपसभामुखको राजीनामा नआएसम्म नेकपाले तय भएको उम्मेदवारसमेत सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’
त्यसो भए नेकपाले उम्मेदवार छानेको हो ?
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली संविधानसभाका अध्यक्ष बनिसकेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाउन चाहन्छन् । तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेतालाई नै सभामुख बनाउन दबाब छ ।
प्रचण्डले अघि सार्न खोजेका सभामुख उम्मेदवार अग्नि सापकोटाप्रति तत्कालीन माओवादी खेमाका नेताहरू नै सहमत छैनन् । देव गुरुङलगायतका नेताहरू सापकोटालाई भन्दा नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
लामो छलफलले कसलाई अघि सार्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकिरहेका बेला उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको राजीनामा नदिने अडानले नेकपालाई सभामुखको उम्मेदवार छान्न ‘फलामको चिउरा’ बनेको छ ।
तर, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल भने सभामुखमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । आइतबार नेकपा भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूको केन्द्रीय कमिटीको शपथग्रहण समारोहमा महासचिव पौडेलले भने, ‘सभामुख चयनको विषयमा पार्टीले हार्दिकतापूर्ण निर्णय गर्नेछ ।’
तर, सचिवालयमा सभामुख उम्मेदवारका विषयमा सहमति नजुट्नु, नेतापिच्छे फरक–फरक अभिव्यक्ति आउनु र पछिल्ला दिन उपसभामुखले समेत पार्टीप्रति विश्वास नगर्नुले सभामुख चयनलाई लिएर नेकपाभित्र निकै ठूलो मतभेद सतहमा देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘प्रतिनिधिसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो’
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल यो समस्या लम्ब्याउन नहुने बताउँछन् । ‘यति लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु ठीक भएन । यसले राजनीतिक प्रणालीलाई नै दुषित बनाउँछ’, रावल भन्छन्, ‘नेकपा र उपसभामुखबीचको टसलले देश र जनतालाई क्षति पुर्‍याउँछ, जनमानसमा पार्टीको छवि पनि राम्रो हुँदैन, त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ ।’
किन स्थगित गरिँदै छ प्रतिनिधिसभा बैठक ?
प्रतिनिधिसभामा अब बस्ने बैठकको पहिलो एजेण्डा नै सभामुखको निर्वाचन हुनेछ । उपसभामुखले राजीनामा नगरेकाले नेकपाकै आग्रहमा बैठक स्थगित गरिँदै आएको छ ।
उपसभामुखले राजीनामा नगरी बैठक बस्यो र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइयो भने कांग्रेस वा अर्को कुनै पार्टीले सभामुखमा उम्मेदवारी दिनेछन् । उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फे बहाल रहेकै अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढे नेकपाले सभामुख गुमाउनुपर्छ ।
उपसभामुखले राजीनामा नगरे के हुन्छ ?
उपसभामुखले राजीनामा नगरे नेकपाले सभामुख गुमाउनेछ । उपसभामुखलाई हटाउन महाअभियोगको सम्भावना पनि छैन । महाअभियोगका लागि उपसभामुखले ‘परीक्षणयोग्य कसुर’ गरेको हुनुपर्छ ।
उपसभामुखको हैसियतमा तुम्बाहाम्फेविरुद्ध कुनै कसुर देखिँदैन । र, राजीनामा नदिनु कसुर होइन । त्यसैले सभामुख पद नगुमाउने भए तुम्बाहाम्फेलाई मनाउनुको विकल्प नेकपासँग नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २७, २०७६, १३:५४:००